Salman Khan Muxuu Sameeyay Mar Loo Soo Bandhigay In Aishwarya Rai Walaalkeed Ku Matalo Shaashada - Hablaha Media Network
Salman Khan Muxuu Sameeyay Mar Loo Soo Bandhigay In Aishwarya Rai Walaalkeed Ku Matalo Shaashada
HMN:- Bollywood Super Star Salman Khan waa jilaa ku fashilmay dhamaan xiriirada uu sameeyay haba ugu darnaato midka Aishwaryai Rai Bachchan.
Salman Khan wuxuu xiriir la sameeyay atiriishooyinka caan ah sida Sangeeta Bijlani iyo Katrina Kaif laakiin markay kala tageen xiriir wanaag ku dheehan ama saxiibtinimo ayuu la sameeyay.
Salman Khan iyo Aishwaray Rai xiriirkooda wuxuu soo bilaabmay inta uu socday duubista filimka Sanjay Leela Bhansali ee Hum Dil De Chuke Sanam xitaa is fahamka ka dhaxeeyo waxay kusoo bandhigeen filimka.
Ka dib waxay noqdeen lamaane nolasha isku fahamsan laakiin ma ogtahay inta aysan labadaan lamaane 2002 kala tagin ka hor Salman Khan loo soo bandhigay inuu shaashada ku matalo Aishwarya Rai walaalkeed.
Salman Khan filimka loo soo bandhigay filim kale ma aha waa filimka Josh oo director ka ahaa Mansoor Khan oo Sallu usoo bandhigay in filimka Josh uu ku matalo Aishwarya walaalkeed.
Salman Khan ayaana ka diiday Mansoor Khan in jaceylkiisa dhabta uusan shaashada ugu matali doonin walaal asigoo iska diiday sameynta filimka Josh.
Sida aan wada ognahay ka dib filimka Josha waxaa sameeyay Super Star Shah Rukh Khan oo ku matalay Aishwarya walaakeed.